सलमानसँग फार्म हाउस गएकी ज्याकलिन लकडाउन भएर त्यहीँ थुनिएपछि… – E Kutumba
सलमानसँग फार्म हाउस गएकी ज्याकलिन लकडाउन भएर त्यहीँ थुनिएपछि…
By ईकुटुम्ब	 On May 6, 2020 0
मुम्बइ। बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिज अहिले सलमान खानको पनवेलस्थित फार्महाउसमा सलमानसँगै छिन् । ज्याकलिन सलमानसँग उनको फार्महाउस गएकी थिइन् तर लकडाउनका कारण उनी त्यहीँ अड्किएकी छिन् । अहिले उनले सलमानँग आफ्नो दिन कसरी बितिरहेका छन् भनेर बताएकी छिन् ।
यदि कोभिड-१९ विरूद्धको भ्याक्सिन बनेन भने के होला? हाम्रो जीवन कस्तो होला ?
चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले सुरु गर्यो ‘कल्याणकारी कोष’
दुर्गेशलाई बहिष्कार गर्ने दोहोरीगीत प्रतिष्ठानको निर्णय प्रतिष्ठानका कुनै पनि सदस्यले दुर्गेशसँग सहकार्य नगर्ने